အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲ ကြွေလွင့်ရပြန်တဲ့ Rapper XXXTentacion
19 Jun 2018 . 12:02 PM
Sad! နဲ့ Changes လို သီချင်းတွေကို သီဆိုခဲ့တဲ့ Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ XXXTentacion ဟာ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်၊ Broward County မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့က ပစ်သတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
နာမည်ရင်း Jahseh Onfroy လို့ ခေါ်တဲ့ Rapper XXXTentacion ဟာ သေဆုံးချိန်မှာ အသက် ၂၀ ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ သူဟာ ဖလော်ရီဒါမှာ ရှိတဲ့ ဆိုင်ကယ်အရောင်းဆိုင်တစ်ခုကနေ ထွက်လာပြီး သိပ်မကြာခင် ညနေ ၄နာရီအချိန်မှာ ပစ်သတ်ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပစ်ခံရတဲ့ အနီးအနားက XXXTentacion ရဲ့ ကား
Broward County က ရဲတွေရဲ့ အဆိုအရတော့ အနက်ရောင် SUV ကားနဲ့ လူနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ပစ်သတ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လူသတ်သမားတွေရဲ့ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကိုတော့ မျက်မြင်သက်သေတွေ ရှာပြီး စုံစမ်းနေတုန်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဖလော်ရီဒါနယ်ခံ Rapper XXXTentacion ရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ SoundCloud မှာ သူတင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေက စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတွေ အလုပ်ဆုံး Rapper တွေထဲက တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သီချင်း Sad! ဟာဆိုရင် Billboard Hot 100 မှာ နံပါတ် ၇ နေရာထိ ရောက်ရှိဖူးပါတယ်။
သူဟာ အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ စွပ်စွဲခံထားရသူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်ကို လွယ်ထားရတဲ့ ရည်းစားကို အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ စွဲခံရတာပါ။ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ပြစ်ဒဏ်ကနေလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လကမှ လွတ်မြောက်ထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်လည်း ရိုက်ခတ်ခဲ့ပြီး Kanye West လို ဆရာကြီးက အစ Twitter မှာ Tweet တင်ခဲ့တာပါ။ သူ့လိုပဲ တခြားနာမည်ကျော်ကြားသူတွေကလည်း ဝမ်းနည်းအောက်မေ့ကြောင်းစာတွေ တင်ခဲ့ကြတာပါ။
R.I.P @xxxtentacion sad day for music. He wasareal talented musician, only 20yrs old. 😪
ဒါကြောင့်ပဲ မနက်ဖြန်ဆိုတာ ကတိပေးထားတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ ဒီနေ့ ရှိရင် ရှိပေမယ့် မနက်ဖြန်ကျမှ ပျောက်ကွယ်သွားရင် သွားနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတာပါ။
Ref : cnn.com, bbc.com
အသကျငယျငယျရှယျရှယျမှာပဲ ကွှလှေငျ့ရပွနျတဲ့ Rapper XXXTentacion
Sad! နဲ့ Changes လို သီခငျြးတှကေို သီဆိုခဲ့တဲ့ Rapper တဈယောကျဖွဈတဲ့ XXXTentacion ဟာ ဖလျောရီဒါ ပွညျနယျ၊ Broward County မှာ ပွီးခဲ့တဲ့ တနင်ျလာနကေ့ ပဈသတျခံလိုကျရပါတယျ။
နာမညျရငျး Jahseh Onfroy လို့ ချေါတဲ့ Rapper XXXTentacion ဟာ သဆေုံးခြိနျမှာ အသကျ ၂၀ ပဲ ရှိပါသေးတယျ။ သူဟာ ဖလျောရီဒါမှာ ရှိတဲ့ ဆိုငျကယျအရောငျးဆိုငျတဈခုကနေ ထှကျလာပွီး သိပျမကွာခငျ ညနေ ၄နာရီအခြိနျမှာ ပဈသတျခံရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အပဈခံရတဲ့ အနီးအနားက XXXTentacion ရဲ့ ကား
Broward County က ရဲတှရေဲ့ အဆိုအရတော့ အနကျရောငျ SUV ကားနဲ့ လူနှဈယောကျရောကျလာပွီး ပဈသတျသှားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ လူသတျသမားတှရေဲ့ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျကိုတော့ မကျြမွငျသကျသတှေေ ရှာပွီး စုံစမျးနတေုနျးပဲ ရှိပါသေးတယျ။
ဖလျောရီဒါနယျခံ Rapper XXXTentacion ရဲ့ အောငျမွငျမှုဟာ SoundCloud မှာ သူတငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှကေ စတငျခဲ့တာ ဖွဈပွီး အငွငျးပှားဖှယျကိစ်စတှေ အလုပျဆုံး Rapper တှထေဲက တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ သီခငျြး Sad! ဟာဆိုရငျ Billboard Hot 100 မှာ နံပါတျ ၇ နရောထိ ရောကျရှိဖူးပါတယျ။
သူဟာ အိမျတှငျး အကွမျးဖကျမှုတှနေဲ့ စှပျစှဲခံထားရသူဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ ကိုယျဝနျကို လှယျထားရတဲ့ ရညျးစားကို အကွမျးဖကျမှုတှနေဲ့ စှဲခံရတာပါ။ နအေိမျအကယျြခြုပျပွဈဒဏျကနလေညျး ပွီးခဲ့တဲ့ မတျလကမှ လှတျမွောကျထားသူ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ သဆေုံးမှုဟာ လူမှုကှနျရကျတှပေျေါလညျး ရိုကျခတျခဲ့ပွီး Kanye West လို ဆရာကွီးက အစ Twitter မှာ Tweet တငျခဲ့တာပါ။ သူ့လိုပဲ တခွားနာမညျကြျောကွားသူတှကေလညျး ဝမျးနညျးအောကျမကွေ့ောငျးစာတှေ တငျခဲ့ကွတာပါ။
ဒါကွောငျ့ပဲ မနကျဖွနျဆိုတာ ကတိပေးထားတဲ့ အရာမဟုတျဘူး။ ဒီနေ့ ရှိရငျ ရှိပမေယျ့ မနကျဖွနျကမြှ ပြောကျကှယျသှားရငျ သှားနိုငျတယျလို့ ဆိုကွတာပါ။